FARSAMADA | Hsao2
Markii aad gashid bartan boggan, waxaad qiraysaa inaad aqrisay oo aad aqbashay inaad raacdo shuruudaha hoosta lagu sharaxay. Haddii aadan ku raacsaneyn shuruudaha halkan looga hadlay, waa inaad ka baxdaa bartaan hada.
Ogeysiiska Xuquuqda daabaca
Wax kasta oo ku jira boggan waa la daabacay Ururka Maamulka Adeegyada Aadanaha (HSAO) ama abuuraha asalka u ah sheyga ayaa leh xuquuqda daabacadda; si kastaba ha noqotee, waxaad xor u tahay inaad fiiriso, nuqul ka sameysato, daabacdo, oo aad u qeybiso walxaha Maamulka Maamulka Adeegyada Aadanaha (HSAO) boggan, illaa iyo inta:
Qalabka waxaa loo isticmaalaa macluumaad keliya.
Qalabka waxaa loo isticmaalay ujeeddooyin aan ganacsi ahayn oo keliya.
Nuqulo ka mid ah shey kasta waxaa ka mid ah Ogeysiiska Xuquuqda Aadanaha ee Adeegyada Aadanaha (HSAO).
Qoraalka looma aqoonsaday inuu yahay mid sir ah
Xuquuqda Qoraalka saddexaad iyo Xuquuqda Wakiilka
Ururka Maamulka Adeegyada Aadamiga (HSAO) waxaa ka go'an inuu ixtiraamo xuquuqaha hantida aqooneed ee dadka kale, waxaanan weydiisaneynaa adeegsadeyaasha inay sidaas oo kale sameeyaan. Ururka Maamulka Adeegyada Insaanka (HSAO), ayaa go'aankiisa iska leh, joojinaya xisaabaadka ama marin u helka adeegsadayaasha ku xadgudba xuquuqda hantida kale ee caqliga leh.
Haddii aad aamminsan tahay in shaqadaada loo guuriyay hab ka dhigaysa ku xad-gudubka xuquuqda daabacaadda ee boggayaga internetka, fadlan u gudbi macluumaadka soo socda Wakaaladda Xuquuqda Aadamiga ee Maamulka Adeegyada Aadanaha (HSAO): Xuquuqda elektaroonigga ama muuqaalka jirka ee qofka loo oggolaaday inuu ku kaco oo ku hadlaya magaca milkiilaha xuquuqda daabacaada; Tilmaanta shaqada daabacan ee aad sheegatay in lagu xadgudbay; Tilmaanta halka ay ku andacoonayaan in ay ku xadgudbayaan ay ku yaalliin bartayada internetka; cinwaankaaga, taleefankaaga, iyo cinwaanka emaylka si aan kula soo xiriirno; oraah adiga kugu saabsan inaad aaminaad fiican uleedahay in isticmaalka lagu muransan yahay uusan ogoleyn milkiilaha xuquuqda daabacada, wakiilkiisa, ama sharciga; iyo cadeyn adiga, oo lagu sameeyay ciqaabta been abuurka, in macluumaadka kujira ogaysiiskaaga annaga uu sax yahay iyo inaad adigu leedahay milkiilaha xuquuqda daabacada ama laguu fasaxay inaad ku shaqeyso magaca milkiilaha xuquuqda daabacaada.
Wakiilka Xuquuqda Aadanaha ee Maamulka Adeegyada HSAO (HSAO) si loo ogeysiiyo sheegashada ku xadgudubka xuquuqda daabacan ee boggayaga internetka waxaa laga heli karaa:
Calaamadaha Ganacsiga & Nuqullada
Ururka Maamulka Adeegyada Aadanaha (HSAO)
Telefoon: (412) 884-4500
Fakis: (412) 885-3900
Hay'adda Maamulka Adeegyada Insaanka (HSAO) iyo sumcadda Maamulka Maamulka Adeegyada Aadanaha (HSAO) waa calaamadaha ganacsiga ama calaamadaha adeegga ee Ururka Maamulka Adeegyada Aadanaha (HSAO) Ma isticmaali kartid calaamadahan ama wax kale oo astaamo ah oo ah Maamulka Maamulka Adeegyada Bulshada (HSAO) ama astaamo adeeg la'aan. ogolaanshaha qoraalka ah ee Ururka Maamulka Adeegyada Aadamiga (HSAO)
Warran ma jiro
In kasta oo Ururka Maamulka Adeegyada Insaanka (HSAO) isku dayo inuu bixiyo macluumaad sax ah websaydhkan, haddana mas'uul kama ahan saxsanaanta. Ururka Maamulka Adeegyada Aadamiga (HSAO) wuxuu badali karaa macluumaadka bogga, ama alaabada la sheegay, waqti kasta ogeysiis la'aan.
Waxyaabaha ku yaal boggan ayaa la bixiyaa "sida ay yihiin" oo aan ka ahayn dammaanad nooc kasta ha ahaadee, ha ahaato ama muuqo ama tilmaam. Ururka Maamulka Adeegyada Aadanaha (HSAO) wuxuu siidaayaa dammaanadaha oo dhan, oo la muujiyaa ama la macneeyay. Tan waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidneyn dammaanad-qaadyada la macneeyay ee ganacsiga, jimicsiga ujeedo gaar ah, iyo xad-gudub la'aan. Waxa kale oo ku jira dammaanad kasta oo la muujiyey ama la macneeyey oo ka soo baxday dariiqo kasta oo loola macaamilo, isticmaal, ama dhaqan ganacsi.
Ururka Maamulka Adeegyada Aadamiga (HSAO) mas'uul kama aha wax toos ah, aan toos ahayn, gaar ah, shil, ama waxyeelo ka imaanaysa isticmaalka - ama awood la'aanta in la isticmaalo - waxyaalaha ku yaal boggan. Tan waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn luminta xogta ama luminta macaashka, xitaa haddii Ururka Maamulka Adeegyada Aadanaha (HSAO) lagula taliyay suurtagalnimada waxyeelada noocaas ah.
In kasta oo websaydhkan laga yaabo inuu ku jiro xiriirro bogagga saddexaad, Ururka Maamulka Adeegyada Aadamiga (HSAO) mas'uul kama ahan waxyaabaha ku saabasan bogagga ku xiran. Ururka Maamulka Adeegyada Aadamiga (HSAO) wuxuu bixiyaa xiriiriyeyaashaan mid ku habboon oo ma taageeraan shirkadaha ama waxa ku jira barta kasta oo lala xiriiriyo.
Helitaanka Wax Soo Saarka
Jiritaanka badeecada lagu sharaxay degelkan, iyo sharraxaadda sheyga, wey ku kala duwanaan kartaa waddan ilaa waddan. Kala tasho Ururkaaga Adeegyada Adeegyada Aadanaha (HSAO) La-tashiga Ganacsiga Teknolojiyada (TBC) wixii macluumaad gaar ah ee soo saarka.
Macluumaadkaaga Dheeraad ah
Waa lagaa reebay inaad dhajiso ama gudbiso wixii sharci darro ah, hanjabaad ah, fisqi ah, xoriyad ah, ama haddii kale wax walboo kugu xadgudbaya.
Wax kasta oo macluumaad ah, macluumaad, ama fikrad ah oo la soo gudbiyo ama lagu dhajiyo Websaydhkan waxaa loo qaddarin doonaa inaynan qarsoodi ahayn oo aan ahayn milkiiliyadeed. Ururka Maamulka Adeegyada Aadamiga (HSAO) ayaa laga yaabaa inuu la wadaago ama haddii kale u adeegsan karo soo gudbintaada ujeeddo kasta ha noqotee. Haddii mid ka mid ah macluumaadka la soo gudbiyey uu ka kooban yahay xog shaqsiyeed, waxaad ku raacsan tahay in Ururka Maamulka Adeegyada Insaanka (HSAO) inuu u gudbin karo xogtaas shaqsiyadeed xuduudaha caalamiga ah ujeeddooyin ganacsi kasta oo Ururka Maamulka Adeegyada Aadanaha (HSAO). Xogta shaqsiyeed waxaa loola dhaqmi doonaa sida lagu qeexay Warbixintayaga Khaaska ah.
Xeerarka Kordhinta Dhoofinta Mareykanka waxay mamnuucayaan dhoofinta macluumaadka farsamada qaarkood iyo softiweer dhulalka qaarkood. Ma jiraan wax nuqul ah oo ka soo baxa degelkan lama soo dejisan karo ama haddii kale loo dhoofin karo iyadoo ku xadgudbeysa sharciga Mareykanka.
Awoodda iyo Xulista Sharciga
Dhammaan sheegashooyinka ama arrimaha la xiriira websaydhkan waxaa lagu maamuli doonaa si waafaqsan shuruucda Gobolka Pennsylvania. Talaabo kasta oo sharci ah oo ku saabsan Shuruudahan ama Websaydhahan waa in lagu keenaa hal (1) sano gudahood ka dib sheegashada ama sababta ficilku soo baxo waana in la keenaa Gobolka Pennsylvania